वयस्क हेरचाह सुविधा र नर्सिंग होमहरूको लागि भिडियो फोनहरू - Konnekt
वृद्ध केयर होम र असिस्टेड बस्ने
परिचय गर्दै Konnekt भिडियोफोन २०, विशेष गरी पाएको हेरचाह, डिमेन्शिया र अशक्तता हेरचाहको लागि डिजाइन गरिएको
वृद्ध हेरचाहको लागि भिडियोफोन २०
साझा तपाईंको केयर होम निवासीहरूका लागि भिडियोफोन
सामाजिक अलगाव कम गर्नुहोस्
COVID-19 को मानसिक-स्वास्थ्य प्रभावहरूलाई कम गर्नुहोस्
बासिन्दाहरूको लागि अतुलनीय सरल
कर्मचारीहरूको लागि अविश्वसनीय सजिलो
किन आईप्याड / ट्याब्लेटले 60०% बासिन्दाहरूको लागि काम गर्दैन
सुरु गर्न र कलहरूको उत्तर दिन धेरै गाह्रो
सानो स्क्रिन, सुन्न गाह्रो, fidly बटनहरू
श्रवणशक्ति हराउने व्यक्तिको लागि कुनै क्याप्शन वा सानो उपशीर्षकहरू छैनन्
कलहरू अवरूद्ध गर्न अति नै सजिलो (पप-अप, मेनू, बटन, आइकनहरू)
स्टाफलाई रहन, हेर्न, र कल अन्त्य हुन को लागी आवश्यक पर्दछ
हाम्रो सरल, बुलेट प्रूफ भिडिओफोनको साथ आफ्नो स्टाफ फ्रि-अप गर्नुहोस्।
बासिन्दाहरूको लागि सरल
एक स्पर्श ANSWER, स्वत: उत्तर विकल्पको साथ
केहि गलत हुन छैन
डिमेंशिया, श्रवण हानि, कम दृष्टि, गतिशीलता / निपुणता सीमाहरूको लागि बनाईएको
स्टाफ को लागी सरल
कर्मचारीलाई भिडियोफोन टच गर्न पनि आवश्यक पर्दैन - COVID-Safe
स्टाफ बस्न आवश्यक छैन, हेर्नुहोस् र कुर्नुहोस्
द्रुत ROI: सामान्यतया -3--6 महिना *
परिवार र साथीहरूको लागि सरल
तपाईंको मोबाइल फोन, कम्प्युटर वा ट्याब्लेटबाट भिडियो कल
स्काइप प्रयोग गर्दछ: परिवारको कुनै कल लागत वा सदस्यता छैन
तपाईं कुनै पनि फोनबाट भिडियो फोन डायल गर्न सक्नुहुन्छ, ल्यान्डलाइन सहित
भिडियोफोन २० तपाईको बुढो हेरचाह गृहको लागि पूर्व कन्फिगर गरिएको आइपुग्छ। यसको आफ्नै फोन नम्बर छ र हुड मुनि स्काइप प्रयोग गर्दछ।
सबैको लागि सरल
घर हेरचाह गर्नुहोस्: महामारीको समयमा भ्रमणहरू कम गर्न निःशुल्क भिडियो कलिंग प्रदान गर्नुहोस्, वा परिवारहरूलाई भुक्तान सदस्यता प्रदान गर्नुहोस्।
केयर कर्मचारी (प्राय: जीवनशैली गतिविधि समन्वयक): यसलाई एक निर्धारित सेवाको रूपमा चलाउनुहोस्, वा बस निवास वा परिवारबाट अनुरोधहरूको जवाफ दिनुहोस्।
परिवारका सदस्य: तपाईंको फोनमा स्काईप अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्, वा तपाईंको पीसी / म्याक ब्राउजरमा स्काईप प्रयोग गर्नुहोस् (कुनै अनुप्रयोग आवश्यक पर्दैन)। एक भिडियो कल अनुरोध गर्न फोन। भिडियोफोनको जोड लि Link्क वा फोन नम्बरका लागि सोध्नुहोस्।
निवासी: भिडियोफोनको अगाडि बस्नुहोस्। जो सुत्ने कोठामा छन् / कुर्सीमा बाध्य छन्, केयर कार्यकर्ताले भिडिओफोन तपाईलाई लैजान सक्दछ, एक वैकल्पिक वायरलेस पहुँच बटनको साथ।
भिडिओफोन कल गर्नुहोस्: परिवारका सदस्यले स्काईपमा भिडियोफोनको फोन नम्बर प्रविष्ट गर्दछ, भिडियो कल आइकन ट्याप गर्नुहोस्। त्यो हो! वा एक स्काईप खाता बिना पीसी / म्याकमा अतिथि लि use्क प्रयोग गर्नुहोस्।
उत्तर: विशाल,-इन्च चौडाई उत्तर बटन थिच्नुहोस्। तपाईं सेकेन्डमा आमनेसामने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। स्वत: उत्तर उपलब्ध छ जहाँ अनुमति छ।
गोपनीयता: केयर वर्कर टाढा हिंड्न सक्दछ र अन्य कर्तव्यों को साथ जान सक्दछ, कल पूर्ण रूपमा निजी छोड्दा।
समूह कलहरू: परिवारको सदस्यले स्क्रिनमा ट्याप गर्दछ र अरूलाई आमन्त्रित गर्दछ। त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई के गर्न को लागी केहि छैन!
फलो-अन कलहरू: उही परिवारका सदस्यले फेरि कल गर्न सक्दछन्, वा परिवारका अन्य सदस्यहरूले कल गर्न सक्दछन्।
फोन कलहरू पनि: पुराना परिवारका सदस्यहरूले कुनै पनि फोनबाट भिडियो कल सामान्य रूपमा कल बिना भिडियो डायल गर्न सक्छन्।
स्टाफ कल गर्नुहोस्: धेरै भयो? निवासी नलहरू स्टाफ कल गर्नुहोस् १ देखि phone फोन नम्बरहरूमा स्पीड-डायल केयर वर्कर्समा।
भिडियोफोन वृद्ध हेरचाहमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरियो
भिडियो कलहरू: असीमित, विश्वव्यापी, समूह कलहरू सहित
नियमित कलहरू: घरेलु फोन नम्बरहरूमा असीमित कलहरू *
फोन नम्बर: कुनै पनि फोनबाट इनबाउन्ड कलहरू प्राप्त गर्नुहोस्
पूर्व कन्फिगर: प्रयोगको लागि तयार छ
सफ्टवेयर अपडेट: एकै रातमा स्थापना गरियो, ध्यान नदिई
सुनको समर्थन कर्मचारीहरु, बासिन्दाहरु, र परिवारका सदस्यहरु को लागी
भिडियोफोन २० विशिष्टताहरू
टचस्क्रिन: २० इन्च (iPad पटक आईप्याड / ट्याब्लेटको क्षेत्रफल)
आयाम: X x x x२ x 49 सेमी डब्ल्यू x एच एक्स डी
स्ट्यान्डको साथ आयाम: X x x x२ x 49 सेमी डब्ल्यू x एच एक्स डी
माउन्ट: कुनै पनि VESA-100 मोनिटर कोष्ठक / पाखुरा प्रयोग गर्नुहोस्
पावर: -90 ०-२260० भोल्ट, /० / H० हर्ट्ज
बहिरापन / गम्भीर श्रवण कमजोरीको लागि क्याप्शन
अन-स्क्रिन डायलर - नियमित फोन नम्बरहरू कल गर्नुहोस् (परिवार सचेत गर्नका लागि, जसले स्काईप मार्फत फिर्ता कल गर्दछ)
कल बटन - एक स्पर्श संग प्रियजनहरु लाई कल गर्न लगातार उपयोगकर्ताहरु को लागी 40 स्पीड डायल बटन
टेलिहेल्थ - भिडियो कल मेडिकल विशेषज्ञहरु लाई बटन
विश्व कलिंग विकल्प - countries 63 देशहरूमा ल्यान्डलाइन नम्बर र countries देशहरूमा मोबाइल नम्बरहरूमा असीमित फोन कलहरू
हार्डवेयर सहायक उपकरण
भिडियोफोनलाई ट्रालीमा माउन्ट गर्न सकिन्छ छिटो र सजिलो चक्रको लागि कोठामा बस्ने कोठामा
यूपीएस पावर सप्लाई - एक पावर आउटलेट प्रयोग नगरी नै परिचालन कार्यलाई अनुमति दिन्छ
4G सेलुलर-मोबाइल ईन्टरनेट मोडेम * - गरीब इन्टरनेटको साथ हेरचाह गृहहरूको लागि
संचालित बाह्य स्पिकर - सुपर चर्को, समायोज्य भोल्युम
ताररहित बटन - ओछ्यानमा सवार / कुर्सी बाध्य निवासीहरूको लागि ठूलो पुश बटन
VESA-100 प्यान टिल्ट कोष्ठक वा पाखुरा - माउन्टको लागि
लगानीमा तपाईंको फिर्ताको हिसाब गर्नुहोस्
एक आईप्याड वा ट्याब्लेट प्रयोग गरेर, तपाइँको हेरचाह कार्यकर्ताले रहनु पर्छ र डिमेन्शिया वा अशक्तता भएका निवासीहरूको लागि प्रत्येक कलको पर्यवेक्षण गर्न अनिवार्य छ
मद्दतको लागि उत्तर दिनुहोस् वा परिवारसँग पुन: सुरु कलहरूसँग
छेडछाड गर्न वा अनजानमै कल अन्त्य गर्न रोक्नको लागि
ट्याब्लेट नक्कल, टुक्रिएको, गलत ठाउँमा वा चोरी भएको छैन सुनिश्चित गर्नका लागि
भोल्युम वा अन्य सेटिंग्स पुन: समायोजित गर्न
संग Konnekt भिडियोफोन २०, तपाईको केयर वर्कर प्रति कल केहि मिनेटका लागि आवश्यक छ।
तपाईंको हेरचाह कार्यकर्ताले निवासीलाई छोड्न र उत्पादक हुन सक्छ जब निवासी आमनेसामने कुराकानी गर्दछ, निजी रूपमा, बहु कलमा, एक वा बढी परिवारका सदस्यहरूसँग।
तपाईंको भिडियोफोन २० आफैंले कति तिर्ने छ गणना गर्नुहोस्।
प्रति दिन कलको संख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्
प्रति कल बचत गरिएको समय प्रविष्ट गर्नुहोस् (मिनेट)
स्वामित्व अवधि प्रविष्ट गर्नुहोस् (हप्ता)
केयर कर्मचारी घण्टा दर प्रविष्ट गर्नुहोस् (ओभरहेड्स समावेश गर्नुहोस्)
प्राप्त उत्पादकता (घण्टा)
5 कार्य दिन / हप्ता मानिन्छ
प्राप्त उत्पादकताको मान
तपाईंको साइटको प्रयोग गर्नुहोस् Konnekt भिडियोफोनका लागि
भर्चुअल धार्मिक सेवा
स्थानीय धार्मिक नेताले पूजा स्थान वा निजी घरबाट स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर प्रसारण गर्न सक्दछन्। एक समान विश्वास साझा गर्ने वा उहि भाषाको आवश्यकताका साथ बासिन्दाहरू एकसाथ भेला हुन र पूजा गर्न एक साझा भिडियोफोनको वरिपरि भेला हुन सक्छन्।
विदेश र अन्तर्राष्ट्रिय आफन्तहरूले उपशामक हेरचाह बिरामीहरू र भ्रमण गर्ने परिवारलाई ठूलो सुविधा प्रदान गर्न सक्दछन्। साधारणतया बेडसाइडको नजिकमा भिडियोफोन राख्नुहोस्, र आफन्तहरूलाई जोड लि link्क प्रदान गर्नुहोस्।
नातिनातिनाको जन्मदिन छुटाउनु हुँदैन! निवासीको कोठामा पार्टी ल्याएर तपाईंले प्रदान गर्न सक्ने आनन्दको कल्पना गर्नुहोस्। र यसको विपरित: अनुसूची आश्चर्य समूहले प्रत्येक निवासीको जन्मदिन मा कल गर्दछ। भिडियोफोनले स्काइप प्रयोग गर्दछ, जसले 50० सम्म भिडियो कलमा सामेल हुन अनुमति दिन्छ। एक लामो, अधिक व्यक्तिगत अनुभव को लागी, एक दिन मा एक कल को श्रृंखला को तालिका बनाउनुहोस् कि पूरा दिन विशेष बनाउँछ।
Or वा अधिक निवासीहरूलाई भिडीफोन साझेदारी गर्न अनुमति दिनुहोस् - एक निवासी वा दिनको आधा दिन - रोटेशनमा। प्रत्येक हप्ता विशेष बनाउनुहोस्। लागत पुन: प्राप्ति वा परिवारलाई नि: शुल्क सेवा प्रदान गर्न साप्ताहिक भ्रमण गर्न असक्षम वा महामारीको बेलामा लक गरिएको।
चिकित्सा चिकित्सकहरू र विशेषज्ञहरूको साथ आभासी भेटघाटहरू। विशेषज्ञले कुनै पनि कम्प्युटर, ट्याब्लेट वा मोबाइल फोनमा स्काईप प्रयोग गर्न सक्दछ; विशेष उपकरणको आवश्यक पर्दैन।
वृद्ध देखभाल गृहहरूको लागि १० फाइदा
Konnekt भिडियोफोन प्रस्तावहरू यो वृद्ध-देखभाल सुविधाहरू, सहयोगी बस्ने, सेवानिवृत्ति गाउँहरू र घर सेवा प्रदायकहरूको लागि लाभहरू:
१. COVID-१ p महामारीको समयमा आगन्तुक प्रतिबन्धहरूलाई कम गर्नुहोस्
थप जान्नको लागि यहाँ पढ्नुहोस्.
के तपाईका बासिन्दाहरुलाई सामाजिक एक्लोपना र एकाकीपनको जोखिममा छ? के तपाइँ हेरचाहको दायित्व पूरा गर्न चाहानुहुन्छ? त्यहाँका बासिन्दाहरू वा कर्मचारीहरूलाई जोखिमविना?
भिडिओफोन कसैलाई पनि, जहाँसुकैबाट सेट अप गर्न सकिन्छ: साधारण रूपमा भिडियोफोन अनबक्स गर्नुहोस् र कुनै पनि पावर आउटलेटमा प्लग गर्नुहोस्। कुनै फोन लाइन आवश्यक छैन।
बासिन्दाहरूलाई वा कर्मचारीलाई कुनै जोखिम छैन.
Konnekt सुनको स्तर समर्थन प्रदान गर्दछ टाढाबाट, कसैको भ्रमणको लागि आवश्यकता बिना।
बासिन्दाहरूले एक ट्यापको साथ कलहरूको जवाफ दिन सक्दछन्। यो अविश्वसनीय सजिलो छ। डिमेंशिया रोगीहरूले पनि स्टाफ बिना नै प्रयोग गर्छन्। स्वत: उत्तर जहाँ उपलब्ध छ।
Konnekt एक मात्र भिडियो कलिंग समाधान छ को लागि विशेष रूप देखि डिजाइन गरियो dementia। यो
फिर्ता जीत स्वतन्त्रता
स्टाफमा निर्भरता कम गर्दछ
गोपनीयता आवश्यकताहरूको समर्थन गर्दछ
पारिवारिक शान्ति को दिमाग बढाउँछ
Konnekt भिडियोफोनले तपाईंलाई आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम गर्दछ भाग IV, बूढा हेरचाह क्वालिटी मानक, सामाजिक र व्यक्तिगत सम्बन्धमा। धेरै ओईसीडी देशहरूको समान स्तरहरू हुन्छन्, जस्तै बेलायत CQC.
सीईओहरू, साइट प्रबन्धकहरू, गृह हेरचाह प्रदायकहरू, क्लिनिकल र जीवनशैली नेतृत्वहरू: के तपाईं यस कथनको लागि आफ्नो टाउको समात्न सक्नुहुन्छ?
कार्यबल अवरोधहरू tackles जसले उपभोक्ताहरूलाई सामाजिक रूपमा जडान गर्नबाट रोक्दछ, व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम राख्छ।
तपाईंले COVID-19 लाई कसरी सामना गर्नुभयो? के तपाईंको सुविधा पारिवारिक अन्तर्क्रियाको साथ teeming छ, वा सबै चुपचाप अलग छ?
तपाईंको संगठनले कसरी सामाजिक समर्थन र सामाजिक अन्तरक्रियाको लागि अवसरहरूको बृद्धि गरेको छ?
आईप्याडहरू / वरिष्ठ ट्याब्लेटहरूको साथ: तपाईंको स्टाफ वरपर दगुर्छ, कोठाबाट अर्को कोठामा, रक्सीको सफासँग, त्यहाँ बस्नेहरूलाई सास नहाल्ने प्रयास गर्दै। यो स्वतन्त्रता, गोपनीयता, र कुनै पनि समयमा परिवारमा हेर्न स्वतन्त्रताको बासिन्दाहरु। यसले तपाईंको कर्मचारीलाई व्यस्त राख्छ, र उनीहरूलाई जोखिममा राख्छ।
यसको विपरित, भिडियोफोनलाई शून्य स्टाफ मद्दत चाहिन्छ। यो संग कुनै मेनू वा मोडहरू छैनन्। यो ठूलो, ठूलो, अविश्वसनीय सरल छ। यो पागलपन, श्रवण क्षमता, कम दृष्टि र गतिशीलता / निपुणता सीमाहरूको लागि विकल्पहरू छन्। के पढ्नुहोस् विश्व-अग्रणी चिकित्सा अनुसन्धानकर्ताहरू र ग्राहकहरु भन्छन्।
2। कल्याण र खुशी वृद्धि भयो
अध्ययनले एकाकीपन र सामाजिक एकाकीकरण लाई लिंक गर्दछ स्वास्थ्य समस्याहरू जस्तै उच्च रक्तचाप, कमजोर निन्द्रा, पागलपन, डिप्रेशन र उच्च मृत्यु दर। (अनुसन्धानको लिंकहरूको लागि, हेर्नुहोस् वृद्ध वा बिरामीको लागि जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने पाँच तरिकाहरू)। यद्यपि वृद्ध केयरका बासिन्दाहरूले ठूलो ध्यान राख्छन् र एक अर्काको कम्पनी, यसले घनिष्ठ मित्र र परिवारको साथ सम्बन्ध बदल्दैन।
-41१--46% निवासीहरू हल्का वा गम्भीर रूपमा छन् निराश - डा। डी मेयर जेरोन्टेक्नोलजी नर्सिंग होम अध्ययन
यो Konnekt भिडियोफोनले त्यो महत्त्वपूर्ण जडान कायम राख्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, आफ्ना प्रियजनहरूका मुस्कानहरू संक्रामक हुन्छन्, खुशी बढाउँछन्, र जीवनको गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछन्।
एक टच स्क्रीन प्रयोग गर्न को लागी अविश्वसनीय सजिलो छ, अधिक स्वतन्त्रता र उच्च आत्म-सम्मान बढावा।
यो Konnekt उसको बुढेस घर हेरको कोठामा भिडियो फोन प्रणालीले वास्तवमा बुबालाई साथीहरू र परिवारसँग राम्रोसँग सम्पर्क गर्न मद्दत गरेको छ। साथै, उसले फोन नम्बर याद गर्नु पर्दैन! प्रणालीको सरलताले उसलाई परिवार र साथीहरूसँग बढी सम्पर्कमा रहन मद्दत पुर्‍याउँछ र एक्लोपन र एक्लोपनको भावनालाई कम गर्दछ।
- वेंडी विन्टर्सगिल, पंजीकृत नर्स (आरएन)।
Cli. ग्राहकको मन शान्त
लीको परिवारले उनीहरूको ट्याब्लेट पीसी उनीहरूसँग छुट्टीमा लिएर आए। तिनीहरू जहाँसुकैबाट उनीहरूको वाइफाइ वा वायरलेस इन्टर्नेटबाट स्काइप मार्फत "दादाजी" कल गर्न सक्षम थिए। उनीहरूले उसलाई बेलुकीको खाना खाने कुराकानीमा भाग लिए, रिसोर्टको भर्चुअल भ्रमणमा लगे, र - सबै भन्दा उत्तम - उनलाई पोखरीमा आफ्ना नातिनातिना पोतेहरू हेर्न दिनुहोस्।
भिडिओफोनले परिवारलाई पहिलो पटक आदरभावमा राख्न, वा आमा वा बुबालाई घरमा एक्लै छोड्न मद्दत गर्दछ। तपाइँको ग्राहकहरु आफ्नो निर्णय को बारे मा राम्रो लाग्छ। तिनीहरू स्वास्थ्य, एक्लोपनको लक्षणहरू, र "नानी" हाँस्दै र राम्रो हेरचाहमा छ भनेर आश्वासन दिन सक्छन्!
4। थप सेवा
उच्च स्तरको हेरचाह प्रदान गर्नु तपाईंको मिशनको केन्द्र हो। तपाईं आफ्नो सेवाहरू सुधार गर्न, उद्योग प्रवृत्तिको अगाडि रहन र तपाईंको प्रतिष्ठा निर्माण गर्न निरन्तर कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ।
Konnekt तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु को लागी एक अतिरिक्त सेवा प्रदान गर्न सक्षम गर्दछ: भिडियोफोन एक या त हुन सक्छ
साझा स्रोतको रूपमा प्रदान गरिएको;
प्रीमियम कोठामा स्थापित;
सामाजिक रूपमा टाढा बसोबास गर्नेहरूको सेवाको रूपमा थपिएको;
स्वतन्त्र रूपमा बाँच्नेहरूलाई बेचिन्थ्यो।
5। कोठा छिटो भर्नुहोस्
वृद्ध केयरमा संक्रमण चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। सम्भावित ग्राहकहरू - विशेष गरी छोटो अवधिको ग्राहक ग्राहकहरू - प्राय: भेट्न र पाँच वा अधिक सुविधाहरूको अन्तर्वार्ता। बासिन्दाहरूलाई उनीहरू मन पराउने मानिस र उनीहरूको वरपरको सम्बन्ध गुमेको डर छ। परिवारहरू देख्नको लागि सक्षम हुन चाहन्छन् कि उनीहरूको प्रियजन खुशी र राम्रो देखिन्छन्।
यो Konnekt भिडियोफोन एक भिन्नता छ कि तपाइँको ग्राहकको निर्णय छिटो, तपाइँको समय खाली र कोठा भर्न। सन्तुष्ट राहत ग्राहकहरू फर्किन्छन्। एक दिन, तिनीहरू लामो अवधिको बासिन्दाहरू हुन् जसले तपाईंको प्रीमियम सेवाको सराहना गर्छन्।
कम भ्याकेसन को रूपमा दुई हप्ता प्रत्येक को लागी भुक्तान गर्दछ Konnekt भिडियोफोन।
L. जीवनशैली कोओर्डिनेटर: सम्पर्क निवासीहरू
तपाईको जीवनशैली गतिविधि समन्वयक, डाइभर्शनल थेरापिस्ट वा सामाजिक कार्यकर्ताले व्यक्तिलाई परिवारमा जोड्न सक्छन् - महामारीको समयमा महत्त्वपूर्ण!
Konnekt साझा प्रयोग (आगमन कल) को लागी प्रत्येक भिडियोफोन सेट अप गर्न सक्दछ। थप रूपमा, 40० भन्दा बढी बासिन्दाहरूलाई एक-टच परिवार कल बटनहरू प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। हामी तपाईंलाई भिडियो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न मद्दतको लागि साइटहरूमा भिडियो फोनहरू लिंक गर्न सक्छौं।
तपाईंको व्यवसाय विकास प्रबन्धकले भाडोफोनलाई प्रयोग गर्न सक्दछ तपाईंको घरको नवीन सेवाहरू सम्भावित ग्राहकहरूको लागि बढावा दिन।
एक साझा भिडियोफोन अनुभव पछि, एक निवासी को परिवार को लागी किराया वा आफ्नो कोठा को लागी एक एकाई किन्न सोध्न सक्छ।
Problem. समस्या ब्यवहारलाई खुशीको साथ बदल्नुहोस्
व्यवहार समस्याहरू तब प्रकट हुन्छ जब एक निवासीले एक्लो महसुस वा बोर लाग्छ:
सहयोग गर्न अस्वीकार गर्दै
अन्य बासिन्दाहरूलाई विचलित गर्दै
नर्स-कल बटन बारम्बार थिच्दै
कमजोर व्यक्तिगत स्वच्छता
घर जान आग्रह गर्दै
त्यहाँका बासिन्दाहरूले उनीहरूको चश्मा, सुन्ने उपकरणहरू वा हिड्ने सहयोगहरू प्रयोग गर्न बेवास्ता गर्छन्। यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।
परिवार र साथीहरूसँग बलियो बन्धन कायम गरेर, भिडियोफोनले सामाजिक अलगाव कम गर्दछ र स्वस्थ बानीहरूलाई बढावा दिन्छ। खुशी बस्नेहरू, खुशी कर्मचारीहरू!
Staff. स्टाफको दक्षता बढाउनुहोस्
जब कुनै छोरी वा छोराले कल गर्दछ, तपाईंको केयर वर्कर सामान्यतया ताररहित फोन वा ट्याब्लेटको साथ तपाईंको सुविधा वरिपरि बसाउँदछ, निवासीको खोजीमा। तपाईंको केयर वर्करले कल समाप्त नभएसम्म सहयोग गर्नुपर्दछ।
भिडियोफोनको साथ, भिडियो कलहरू र सामान्य फोन कलहरू सजिलो हुन्छन् र ह्यान्ड्स फ्री। केयर कार्यकर्ताले कलको अन्त्यमा पर्खनु पर्दैन।
Resident। निवासी आपतकालिन टाढा बाट भाग लिनुहोस्
प्रत्येक कोठामा एक भिडियोफोनको साथ: व्यस्त समयमा, कर्मचारीहरू आफ्नो भिडियोफोनमा बसोबासहरूलाई बोलाएर "नर्स-बटन कल" गर्न छिटो उपस्थित हुन सक्छन्। यसले कर्मचारीलाई कोठा भ्रमणहरूलाई प्राथमिकता दिन मद्दत गर्दछ जब बहु निवासीहरूले एकै समयमा कल गर्दछन्। साधारण रूपमा भिडियोफोन कल गर्नुहोस् र निवासीलाई भिजुअल रूपमा हेर्नुहोस्।
वेब-क्याम विपरीत, कलकर्ताले निवासीमा "जासुसी" गर्दैन: निवासीको भिडियोफोन बज्छ र यदि म्यानुअल उत्तर दिएन भने, यो (वैकल्पिक) स्वत: जवाफ दिईन्छ - तर केवल विश्वासिलो कलरहरूको लागि जुन तपाईले मनोनीत गर्नुभयो - TWO-Way को साथ भिडियो र आवाज। यसले निवासीलाई कसले कल गर्दैछ हेर्नको लागि अनुमति दिन्छ र तपाईंको हेरचाह कार्यकर्तासँग दुईतर्फी कुराकानी गर्दछ।
10। बूढा हेरचाह क्वालिटी मानक
वृद्ध देखभाल गुणवत्ता मानक जनादेश कि निवासीहरु, साथै घर-घर सेवाहरू प्राप्त गर्नेहरूले पर्याप्त सामाजिक संलग्नता प्राप्त गर्नु पर्छ। OHSU अध्ययनहरूले देखाए कि केवल अनुहार-देखि-कुराकानीले सामाजिक अलगाव र आधा खतरनाक जोखिम कम गर्‍यो।
तपाईंको ग्राहकहरूलाई भिडियोफोन प्रस्ताव गरेर, तपाईं स्वतः सामाजिक संलग्नता बढाउनुहुन्छ, लेखा परीक्षकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ र साथै तपाईं आफ्नो ग्राहकहरूको प्रस्ताव सेवाहरूको दायरा फरक गर्न मद्दत गर्दछ।
का लागि डिजाईन वृद्ध हेरचाह सुविधा
हामी तपाईलाई उठ्नको लागि सजिलो गर्दछौं
Konnekt तपाइँको ग्राहक जानकारी प्याक को लागी एक उत्पाद उडान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। निवासीहरू र ग्राहकहरूको लागि भिडियोफोन प्रदर्शन गर्न सजिलो छ।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस हामी कसरी तपाईंलाई तपाईंको ग्राहकहरूको आश्चर्य र रमाइलो गर्न, उनीहरूको डर हटाउन, र तपाईंलाई आफ्नो व्यस्त स्टाफ लोड नगरीकन प्रीमियम सेवाको साथ उभिन मद्दत गर्न सक्दछौं भनेर सिक्न।
95% of Konnekt भिडियोफोन -०-दिन परीक्षण सफल छन्।